Ukuze impilo yomzimba, yebo, osebenza ku impilo yomlomo. Abazali aphoqelelwe ukuqapha isimo namazinyo izingane zabo. imikhiqizo Modern Lemvelo futhi GMO ezimbi empilweni. Bayanda kukhona amacala izilonda ekuqaleni we caries zamazinyo nezinye izifo ezinganeni. Isizathu sokukhathazeka iyona black emazinyweni ingane.
Plaque nezinhlobo zayo
Ubisi kwamazinyo izingane imbozwe touch ubudala konyaka. Kodwa ngaso sonke isikhathi ushintsho umbala kungaba isizathu sokukhathazeka. Kunezizathu eziningi ukuze lesi simo. Ngisho emoyeni elomile zasendlini ikhuthaza ivela khona. Hlobo luni kugasela futhi kungani leyo mithi ingane?
Izici umzimba kwengane ayenzi ukuba kunyatheliswe ngamathe ngokwanele, ukugeza umlomo womntwana. Kule ndaba, anqwabelene koqweqwe lwawo epithelium, izinhlayiyana zokudla namagciwane. Uma ungenalo unake ke, nezimagqabhagqabha amhlophe siya ngaphezulu inkinga - tartar. Kodwa black baby amazinyo ezingane bheka unaesthetic.
Sigasele amazinyo abantwana kungaba yimuphi umbala:
Yellow kubonisa ukungahlanzeki kanye ukuphazamiseka kwemikhuba yokudla. Lesi yisihloko sokuqala uphawu caries ibhodlela.
Khanyisa grey koqweqwe lwawo iyinkomba yokuthi khona amazinyo hypoplasia. Kulokhu, ukwelashwa kufanele sifanelekele.
patina ogqamile livela izingane iminyaka 2-4 ubudala esimweni umonakalo pellicle kwamazinyo. Udinga yokuhlanza Akhethekile.
namazinyo Brown kwenzeka ngenxa esiningi ngokweqile yensimbi excreted ngamathe.
izindawo Black on the amazinyo ingane - inkinga ezivamile. Wonke umzali wesibili exinwe singagqunqi we koqweqwe lwawo ezinganeni.
Kusukela namabala amnyama emgodini
Uma ingane siyashintsha umbala wamazinyo, abazali kufanele kukhokhelwe le nkinga phambili kunayo. Aphuzi enamathela mhlophe futhi kungaba zisuswe kusetshenziswa evamile yansuku zonke yokuhlanza unama. Kodwa ngale ndlela akuyona ukuqeda izinkinga ezifana namazinyo emnyama ezinganeni. Photo mnyama koqweqwe lwawo kunalokho edabukisayo.
ngokuvamile aqoshwe oqwembeni shades amnyama is phetho izici umzimba wengane. Lezi zici ungavumeli ukukhiqiza ngamathe ngokwanele lapho ugeza kude umlomo futhi izinhlayiyana zokudla epithelium.
Inani elikhulu lama-bacterium awusizo yakhiwa enamathela, futhi alawa magciwane ayingozi - naphakathi omuhle ukuze kwakhiwe tartar noma caries ukuvuvukala. namazinyo Black e ingane - inkinga evamile odlulela abazali ukuba ngilidlulisele onguchwepheshe.
UPriestley ngokuthi kuhlasela i ukuhwalala okunamandla koqweqwe lwawo amazinyo zezingane. Yisikhathi obungenakuphikwa ukuba ubheke wamazinyo. UPriestley Plaque kuyisinyathelo sokuqala ekuthuthukiseni izifo sina we ngalo ingaphakathi ngomlomo.
UPriestley okungukuthi qwembe zingase zimiswe ephula microflora Git nodabukile emlonyeni. Amagciwane ande ngesivinini esikhulu kakhulu, okuholela singagqunqi we koqweqwe lwawo. Lahla inkinga ngeke kuphela wamazinyo nge ukuxubha ekhethekile. Inqubo kobuhlungu. Ingane le zokukhwabanisa akabashiyi emizweni ezingemnandi kusukela Ukuvakashela udokotela wamazinyo.
Ngokuvamile abazali ngifuna impendulo umbuzo mayelana nokuthi kungani ingane black amazinyo futhi kungani kukhona uPriestley uqweqwe. Kubalulekile ukwazi ukuthi ukuhwalala we koqweqwe lwawo is phetho dysbiosis noma izifo yaleli pheshana emathunjini, abazali abangalingisa, nje abazi. Kulokhu kungcono ukuqhuba luhlolo olunzulu wonke umzimba.
Esengumntwana caries wabe ngokushesha kakhudlwana namazinyo lezihlahla kanye ukwa zamazinyo secrete namazinyo eziningana angomakhelwane, ngezinye izikhathi yonke ongenhla noma ephansi. Kusukela sokungasebenzi bangalindela nemiphumela engathi sína, njengoba hhayi trifled nge impilo yomlomo.
omama abaningi benza iphutha ngokucabanga ukuthi amazinyo ezinsana ziyokuwa futhi inkinga uzonyamalala ngamazinyo black ezinganeni. Lena akuyona ngakho. ukubhujiswa Carious, maye, akusho kuphela kuthinte ingxenye okuqinile ngezinyo, ngokuvamile kakhulu kunjalo ukuthi impande siqala ukubhodloza phansi indwangu ethambile emhlabeni, futhi lokhu kuyingozi kakhulu. Kulokhu, usizo kuphela kokususwa ezilimele ukubola kwamazinyo ingane izinyo, ngenhlanhla, kubuhlungu futhi kungabangela kokwesaba kwengane ephikelelayo wamazinyo.
hypoplasia Turner sika
isifo Specific, phakathi ukuthuthukiswa a ngokugcwele noma kancane abhubhise izinyo koqweqwe lwawo, ngokuthi hypoplasia. Lesi sifo kwenzeka ngenxa umzimba bakhubazekile umzimba wengane. umzimba Disturbed, umzimba akusho sokwetshisa amaminerali ukulandelela izakhi, ngenxa yalokho kuba ohlabayo kanye koqweqwe lwawo iba buthaka. Elinye izinyo kungenzeka sidilike, abaphukile umthwalo kancane. Lena esinye isizathu esenza umntwana omnyama qwembe on the amazinyo.
Ngaphezu izizathu ngenhla, hypoplasia amazinyo lezihlahla kungase kube ngebanga lokwephulwa sina wamaprotheni umzimba umzimba wengane. Yingakho hypoplasia is hhayi kuphela kubhekwe esifweni esisodwa kuphela, kodwa kuwumphumela ukwakhiwa kwezinye pathologies sina.
Izingane eminyakeni 2-4 kuvamile, ezifana inkinga ngomlomo njengoba caries ubuhlengikazi. Ngegama, ungakwazi kalula lokho okuhilelekile kubaluleke - lesi sifo eba ngenxa yokuthi ingane ngokuvamile sucks isikhohliso noma ibhodlela ngesikhathi sokulala noma emini. Ngakho-ke efiselekayo wean ingane ibhodlela ngokushesha ngangokunokwenzeka, ngoba ngobusuku ku ngalo ingaphakathi ngomlomo izinhlansana ubisi noma inhlanganisela ekugqugquzeleni intuthuko ka caries. Ngenxa yalokho, kukhona amazinyo amnyama ezinganeni. Ubisi namazinyo babe koqweqwe lwawo mncane, iyiphi ahlahlele angabacwasi ngokushesha, yingakho nabo ngokushesha ehlaselwe caries.
Bottle caries unamagama amaningana, abanye bayibiza ngokuthi ubisi noma izingane. Kusukela igama, ungakwazi kalula konke. Leli gama folksy lesi sifo, imithombo yezokwelapha bakuthola.
Okunye izimbangela namazinyo emnyama
namazinyo Black e ingane kungaba ngenxa yezizathu ezihlukahlukene. Ngokwesibonelo, izingane musa ukubhekana nezindlela yokuhlanzeka kungukuthi njalo ukuhlanza kahle amazinyo azo. Ngokuvamile ungabona ukuthi umama khotha umntwana pacifiers, becabanga ukuthi zihlanzwe, kodwa akunjalo. Esikhathini ngomlomo ingaphakathi ukuwa ingane amagciwane alien, kamuva nokuzala.
Ngenxa yokuswela amavithamini - imbangela singagqunqi we amazinyo abantwana. Mhlawumbe umntwana is hhayi ukudla izithelo nemifino. nomswakama encishisiwe egumbini - hhayi isici esihle. Yiba nomthelela omubi nemithi equkethe zensimbi ngezithako zawo. Njengoba yaziwa, black baby amazinyo zenzeka ngenxa yensimbi ngokweqile.
Kuyadingeka Yiqiniso, xhumana nodokotela wamazinyo uma ingane yakho ine namazinyo emnyama. Okufanele ukwenze nendlela yokubhekana nale nkinga, tshela afanelekayo nje ukunakekela izingane ochwepheshe. Okokuqala, inquma yimbangela ukuhwalala amazinyo, futhi okwesibili, linqume indlela yokwelashwa.
Kuye izinga lomonakalo kanye nokuba khona izinyathelo ezilandelayo zingafundwa isifo.
izilonda Carious selashwe izindlela ezilula: iziguli isiliva noma fluoridation amazinyo. Izindlela zokwelapha Site e kusaqalwa ukubola kwamazinyo. Ngakho-ke, ngakho-ke kubalulekile ukuvakashela udokotela wamazinyo wakho ngokushesha ngangokunokwenzeka.
Nokususa elinegciwane ezithambile kwezicubu ikhava ingilazi ionomer usimende ingxube abazenzi ngesikhathi kubhujiswa olukha phezulu carious. Ezimweni ezimbi kakhulu nge-acute inqubo ubuhlungu wenziwa ngaphansi kwethonya izinzwa. umbono wayo imvume ukusebenza eyanikezwa abantu abafundile njengabameli ukuthi wenhliziyo, i wemithi yangaphakathi futhi isazi sezinzwa. Phakathi nenqubo kanye nesimo ingane kufanele kube ongudokotela obulala izinzwa.
Ungabuyela umbala wemvelo amazinyo bebodwa, uma imbangela ukuhwalala kuyinto overabundance yensimbi. Kulokhu kwanele ukuba inciphise ukudla.
Lapho ukuntuleka calcium emzimbeni wezingane ingane ukhombe izidakamizwa ukugcwaliswa isitokwe lokhu microelements ewusizo.
namazinyo Black ezinganeni, izimbangela zazo amanga ngendlela dysbacteriosis noma izifo fungal, zidinga ukungenela wamazinyo wezingane. Ochwepheshe kufanele, okokuqala kunakho konke, ukuhlonza isifo eyinhloko futhi likwazi ukuthatha izinyathelo yokuphatha kulo.
yokudla Night akufuneki ukuba ususe ngokushesha nje imvuthuluka lizovela ubisi amazinyo kuqala. Uma kube nzima ngempela, ubisi lwebhodlela noma ijusi yezithelo ungayithola enye amanzi plain. Ngemva kwesikhathi esithile esicelweni izinyane yayiphuzisa kusuka Element inkomishi noma mug elula, kodwa hhayi kusuka ibhodlela.
Buka eduze izinguquko umlomo wengane. Uma ekuphangeni-ke ngokushesha uthintane wamazinyo wakho, ngubani lizosiza ukukhethwa izindlela ezihlanzekile.
Ukuze ahlanze ngowokuqala umntwana amazinyo kuhle ukusebenzisa zezinkambi engamakhambi, okuhlanganisa sage, chamomile Thyme. Enough imanzise ngxube ibhola ukotini kanye wazesula namazinyo imvuthu. Njengoba ingane yakho ikhula, ungakwazi ukufuna usizo hashaza futhi kancane kancane uqale nsuku izinyo ukuxubha.
Toddler ngezikhathi zokudla kufanele asebenzise spoon yakhe kuphela noma ekuphambukeni. Awukwazi ukunikeza ingane spoon yomunye umuntu (ubaba, umama, umfowethu). izilonda Carious ngocansi kalula. Kungcono ukuvakashela udokotela wamazinyo okokuqala, lapho umntwana kwezinyanga ezingu-9 ubudala. izindlela Okwalandela ajwayele kanye njalo ezinyangeni eziyisithupha.
8 amaphutha ezivamile zenzeka ngisho naphakathi abalobi ezinhle